'Handisati Ndamboona Kuti Mwaka wekudyara Wakatora Nguva Yakareba' - Potatoes News
'Handisati ndamboona kuti mwaka wekudyara wakatora nguva yakareba kudaro'
Pakupera kwaKurume, mbatatisi dzekutanga kubva kumurimi anorimika Ben Minkhorst anobva kuHummelo (GD) akapinda muvhu. Nekuda kwechirimo chakanyorova, mbatatisi dzekupedzisira hadzina kudyarwa kusvika kupera kwaMbudzi Paive zvakare nemvura zhinji yakatenderedza 17 Chivabvu, zvichikonzera mafashama.
Iyo nzvimbo isina chinhu muvhu rembatatisi imhedzisiro yemafashama ayo murimi anorimika Ben Minkhorst anobva kuHummelo aifanira kurwisana nawo muna Chivabvu gore rino.
Iyo mbatatisi yakanyura.
Iwe unonzwisisa kuti hapasisina chero mbatatisi yakanaka mune izvi, anodaro Ben Minkhorst wepurazi rekurima Minkhorst. “Ndinofunga kuti takasangana nemafashama emvura pamakumi mashanu emahekita 50 ematapatata. Uye izvo zvikamu zvishanu kubva muzana zveekare zvakaora. ”
Anoburitsa foni yake oratidza vhidhiyo yaakagadzira yeimwe yeminda yake yemazambane mushure mekunaya kwemusi wa17 Chivabvu. Zvinogona kuoneka kuti pachikamu chepazasi chechikamu mvura iri pakati pemativi embatatisi. Munzvimbo dzinoverengeka migero inonyangarika zvachose pasi pemvura. “Mumazuva maviri, anenge mamirimita makumi mashanu nemashanu akadonha. Kunyanya nzvimbo dzaive dzichangobva kudyarwa nekukuyiwa dzaisakwanisa kugadzirisa mvura zvakanaka. Takanga tisati tasvika kunochera migero, izvo zvatinowanzoita seyakajairwa. ” Mushure memvura zhinji, Minkhorst nevashandi vake vakachera migero nemaoko kwemazuva kuti vasiye mvura yakawandisa nepese pavaigona uye kudzivirira kumwe kukuvara.
Iye Hummelose anorima murimi anorima haashamisike nemvura zhinji dzinorema. Hazvina basa kuti anochera mugero wakazara muzvikamu zvake. Uye anofunga kuti zvine musoro chete kuti kurima mbatatisi kunoperekedzwa nezvipingamupinyi. “Ndicho chirevo chekuti hapana chingakanganisika nemahekita mazana maviri nemakumi mashanu. Unofanira kuramba uchiona zvinhu sezvazviri, ”anodaro Minkhorst. “Gore rega rega igore rakakosha, asi 250 zvirokwazvo 'rimwe chete kubva kuzviuru'. Nekuda kwechirimo chakanyorova isu takanga tichiri kudyara musi wa2021 Chivabvu. Ndine makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa uye handisati ndamboona mwaka wekudyara wakatora nguva yakareba kudaro. Kazhinji tinotora anopfuura masvondo mana. Uye chikamu cheacreage chakatoora zvakare chitsva kwandiri. ”
Verenga chirevo chizere mu Vee & Gewas weMugovera 3 Chikunguru. Hausati uri wokunyorera zvakadaro? Kumbira yemahara muedzo nhamba pano .
Tags: mamiriro okunzekukurapurazi rembatatisikudyara mbatatisi
Mickelsen Mapurazi anotungamira mukugovana nyaya yevarimi neruzhinji
Savvy agronomy ndeimwe yeakanakisa kudzoka pamari, anodaro Iain Wilson